Kaabta iPhone Data si Mac hor Casriyaynta in macruufka 7
> Resource > Mac > kaabta Your iPhone Data si Mac hor Casriyaynta in macruufka 7
Apple lagu daahfuri doonaa macruufka 7 on September 18, sida hagaajinta lacag la'aan ah. Haddii aad sugayaan nooca buuxda ama diyaar u ah in loo soo dajiyo macruufka 7 beta aad iPhone ahaan, waa in gurmad xogta iPhone si aad u Mac hor casriyeeyo si macruufka aad. Haddii kale, waxaad waayi doonaa xogta oo dhan, oo ay ku jiraan wac log, xiriirada, account taariikheed, sawiro, iyo in ka badan ka iPhone. Dhab ahaantii, ma aha adag tahay in dib xogta iPhone si Mac ah. Waxa kaliya ee aad u qaadataa in ay ku sameeyeen shaqada dhowr daqiiqo. Waxyaabaha soo socda ayaa, waxaan doonayaa inaan adiga kula wadaagno xal dhamaystiran gurmad dhammaan xogta ku saabsan iPhone si Mac.
Maqaalkani waxa uu ka mid ah laba qaybood: Qaybta 1. goobaha iPhone kaabta, fariimaha, files ee ku giringiriya Camera, iwm hor casriyeeyo si macruufka 7 Qaybta non 2. kaabta faylasha iibsaday warbaahinta ka iPhone ay ku Mac hor casriyeeyo si macruufka 7
Qaybta 1. goobaha iPhone kaabta, fariimaha, file ku giringiriya Camera, iwm hor casriyeeyo si macruufka 7
Aan ku bilaabaan xogta iPhone ugu muhiimsan: goobaha, xiriirada, Roll Camera, wac log, iwm Si gurmad xogta iPhone kuwaas, waa in aan u isticmaalno Lugood ku saabsan Mac. Burcad Lugood iyo xiriiriyaan iPhone la Mac via cable USB ah. Marka aad iPhone soo muuqdaa uu furmo suuqa weyn ee iPhone, fadlan guji View> Show galeeysid. Markaas aad iPhone waxaa soo bandhigay dhinaca bidix ee Lugood Library hoos Devices. Midig u guji aad iPhone dooro Back Up ka mid ah liiska hoos-hoos. Marka aan sidaa yeelno, dhammaan goobaha aad iPhone iyo xiriir, xiriir cadcad, Messages, videos iyo sawiro ku giringiriya Camera waxaa la badbaadiyey on Mac.
Qaybta 1aad hayaan dhammaan macluumaadka ka iPhone in aad Mac marka laga reebo files warbaahinta, labada iibsaday oo aan ahayn iibsaday. Wixii heeso iyo videos iibsaday, waxaad ka gali kartaa Lugood Store la ID Apple aad mar kale soo bixi in aad Lugood Library. Si gurmad non files warbaahinta iPhone iibsaday, oo ay ku jiraan heeso, videos, bandhigyada TV, sawiro, waa inaad raacdid talaabooyinkan ee qaybta 2.
Qaybta non 2. kaabta faylasha iibsaday warbaahinta ka iPhone ay ku Mac hor casriyeeyo si macruufka 7
Tan iyo Lugood aan gurmad oo aan iibsan karo files warbaahinta ka iPhone si Mac, waxaad isku daydaa inaad codsiga dhinac saddexaad ah. Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa in aad isku daydo Wondershare TunesGo (Mac). Waxaa aad u ogolaanaya in ay gurmad kasta song, video, iyo sawir ka iPhone si Mac. Eeg tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1. Ku rakib gurmad iPhone ku Mac software
Download Wondershare TunesGo (Mac) on your Mac oo ku xidh. Hadda waxa shuqullada si fiican u la iPhone iyo Macs. Riix halkan si aad u aragto Creech casriga ah ee Wondershare TunesGo (Mac). Connect aad iPhone la Mac via cable USB ah. Barnaamijka TunesGo ayaa waxaa si deg deg ah lagu ogaan doonaa. Dadka isticmaala Windows, download Wondershare TunesGo (Windows) si ay xog iPhone gurmad on PC .
Tallaabada 2. kaabta faylasha warbaahinta ka iPhone si Mac hor casriyeeyo si macruufka 7
Laga soo bilaabo uu furmo suuqa ugu weyn, waxaad ka arki kartaa files warbaahinta waxaa lagu kala soocaa galay qaybaha. Dhinaca bidix ee suuqa hoose, waxaad ka arki kartaa Music, Lugood U, Podcasts, xitaa cadaymaha aad iPhone. Photos yihiin ee "Sawirro" Window. Muujinaysaa TV iyo Movies, halkaas waxaa sidoo kale. Daaqada fur file u dhiganta dooro files warbaahinta loo baahan yahay, guji "Dhoofinta" ama "Dhoofinta in Lugood" in ay gurmad kuwaas oo xogta ka iPhone.